Arabia Saodita : Nolazaina Fa Mpivaro-tena Ireo Solontena Vehivavy Voalohany Amin’ny Lalao Olaimpika · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita : Nolazaina Fa Mpivaro-tena Ireo Solontena Vehivavy Voalohany Amin'ny Lalao Olaimpika
Nandika (fr) i Olivia Cochet
Voadika ny 29 Jolay 2012 9:41 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, Deutsch, Español, Français, فارسی, polski, Svenska, Ελληνικά, 日本語, English
(Amin'ny teny anglisy sy Arabo avokoa ny rohy rehetra) Atleta vehivavy roa no hisolontena an'i Arabia Saodita mandritra ny lalao Olaimpika 2012 atao any Londres, nanomboka ofisialy omaly izany ( 27 jolay ). Wojdan Shaherkani (judo) sy Sarah Attar ( atletisma) no vehivavy roa voalohany hiaro ny sainam-pirenena, na dia mandràra ny vehivavy tsy handray anjara amin'ny fanatanjahatena aza ny finoana konservatisma.
Tao amin'ny Twitter, niteraka fihetseham-po marobe ny fandraisan'izy mirahavavy anjara amin'ny Lalao Olaimpika, anisan'izany ny filazana fa toy ny “Mpivaro-tena ho any amin'ny Lalao Olaimpika izy ireo”.
Vao haingana, niteraka antso hanilihana ny firenena tsy handray anjara amin'ny Lalao ny fanambarana nataon'i Arabia Saodita ny amin'ny tokony hanesorana ireo vehivavy amin'ny Lalao Olaimpika any Londres.
Ireo mpilalao roa Saodiana nandray anjara tamin'ny Lalao Olaimpika ao Londres. Sary ahitana ny solontena ofisialy tao amin'ny www.london2012.com
Misy ny fepetra takiana amin'ny fandraisan'ireo vehivavy anjara hiaro ny lokon'ny sainam-pirenena Saodiana : anisan'izany, ny tsy fandraisana anjara aminà taranja iarahan'ny lahy sy ny vavy (mixte), sy ny fanaovana akanjo nenti-paharazana.
Tao amin'ny Twitter, nanome ny anaran'ireo atleta hisolontena ny fireneny amin'ny Lalao Olaimpika ilay bilaogera Saodiana Ahmed Al Omran no sady maneso :
@Ahmed: Indreto ny lisitr'ireo atleta Saodiana handray anjara amin'ny Lalao Olaimpika atao any Londres. Hafahafa, tsy misarom-boaly i Sarah Attar.
Tao amin'ny bilaoginy manokana, lasa lavitra ny fanehoan-kevitry Al Omran :
Mba hampanginana ireo mpino, Prince Nawaf bin Faisal, mariky ny fahefana taloha indrindra tamin'ny fanatanjahatena, nitanisa fitsipika vitsivitsy mikasika ny fandraisana anjara ny vehivavy aminà Lalao fanatanjahatena. Tsy mahazo mandray anjara ireo atleta vehivavy raha tsy “miakanjo mendrika, manaja ny sharia” ary tsy maintsy “ankasitran'ny mpiahy azy koa ny fandraisany anjara ka manaraka azy ny mpiahiny” hoy izy tamin'ny gazety iray an-toerana al-Jazirah. Hoy ihany koa izy nanampy “Tokony tsy hisy ny fifaneraserana na fifandraisana amin'ny lehilahy mandritra ny Lalao.”
Tao amin'ny Twitter, mpiserasera Saodiana tiana antsoina hoe Sultan Al Hilali nizara ny tenifototra #عاهرات_الاولمبياد izay azo adika hoe “Ireo mpivarotena any amin'ny Lalao Olaimpika“, ho fanoharana ireo atleta vehivavy Saodiana. Maro ireo fanehoan-kevitra feno hatezerana noho ilay tenifototra, nisy ihany koa anefa ny fanohanana.
Aljohara namaly hoe :
@SkittlesFairy : Mampatsiahy ahy ny vanim-potoana Moyen Âge tany Eoropa ianao ; haratsianao sy harabirabinao ireo olona amin'ny fivavahana. Fa ny fivavahana, tsia.
Pikantsary misy ilay sioka manaraby ireo atleta vehivavy Saodiana ho toy ny mpivarotena
Rasha Al Dowasi nanampy hoe :
@Rsha_D: Efa an-taonany maro no nandray anjara aminà Lalao Olaimpika ny atleta miozolomana avy amin'ny firenena miozolomana. Tsy hoe rehefa mandray anjara ny vehivavy Saodiana dia lazaina fa lasa fivarotantena ny fanatanjahatena
Marobe ihany koa ireo mpiserasera no nitaky ny tokony hanenjehana ilay mpisera Twitter namorona sy nanaparitaka ny tenifototra tao amin'ny Twitter. Pikantsary taminà sioka niely tamin'ny aterineto milaza ireo vehivavy mandray anjara amin'ny Lalao ho toy ny mpivarotena. Ny tanjona dia ny hiampangana sy hampahamenatra ilay olona niavian'ilay tenifototra.
Nizara ny heviny eto sy eto momba ireo vehivavy Saodiana sy ny Lalao Olaimpika ilay bilaogiera Saodiana Eman Al Najfan. Navoaka miaraka amin'ny gazety The Guardian ireo lahatsoratra roa ireo.
Sambany handefa atleta solontena vehivavy handray anjara amin'ny Lalao ihany koa i Qatar mpifanolo-bodirindrina sy i Brunei.
6 andro izayKatara